RASMI: Axmed Cabdullaahi Baanu oo goolkiisii ugu horreeyey u dhaliyey xulkeenna qaranka Soomaaliya… + SAWIRRO – Gool FM
RASMI: Axmed Cabdullaahi Baanu oo goolkiisii ugu horreeyey u dhaliyey xulkeenna qaranka Soomaaliya… + SAWIRRO
(Kampala) 24 Sebt 2019. Xiddiga daafaca ugu ciyaara kooxda Mogadishu City Club Axmed Cabdullaahi Baanu ayaa maalintii shalay aheyd xulka qaranka soomaaliya u dhaliyay goolkiisii ugu horreyay ee heer caalami ah.
Xulka Qaranka soomaaliya ayaa guuldaro xanuun badan oo 2-1 kala kulmay xulka Burundi ciyaar qeyb ka ahayd tartanka Cecafa Under 20 ee sanadkan ka dhacaya Waddanka Uganda.
Axmed Cabdullahi Cabdi (Baanuu) ayaa xirfaddiisa heerka sare ee kubadda cagta waxa uu ka soo bilaabay heer degmo, isagoo u soo ciyaaray Degmada Hiliwaa xilli ciyaareedkii 2014/15-kii ayuuna qeyb ka ahaa wiilashii matalay degmadaas.
Sanadkiii 2016-kii wuxuu nasiib u yeeshay in loogu yeero xiddigaha matalaya Gobolka Banaadir ee tartankii maamul Goboleedyada, isagoo bandhig wanaagsan ka sameyay tartankaas, waxaana xusid mudan in ay xilligaas koobka Maamul Goboleed ku guuleysteen wiilasha matalayey Puntland.
Kaddib Bandhigii wacnaa uu ka sameeyay tartankii maamul goboleedyada, waxaa xiddigan heshiis kala saxiixatay kooxda Mogadishu City Club oo markaas la oran jiray Banaadir Sports Club, isagoo iminka qeyb ka ah xiddigaha udub dhexaadka u ah kooxdan.
Intii uu ku sugnaa kooxdan Mogadishu City Club, waxa uu kula guuleystay Koobab ka kala ah General Daa’uud iyo Super Cup-ka dalka.
Xiddigan ayaa sidoo kale nasiib u yeeshay inuu metelo xulka qaranka markii ugu horreysay ee xulka looga yeeray waxay ahayd sanadkii 2016-kii, laakiin sanadkii xigay ee 2017-kii ayuu xirtay maaliyadda qaranka, illaa iminkana waxa uu qeyb ka yahay xiddigaha xulkeenna ee Ocean Stars.
Axmed Cabdullaahi Baanu ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aaddan goolkiise ugu horeyay inuu xulka u dhaliyay wuxuuna yiri: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan u dhaliyo xulkeyga goolkii ugu horreyay abid, waa dareen ka turjumaya inaad ka mid ah tahay xiddigaha xulka goolal u dhaliyay, waxay ii aheyd riyo ii rumoowday.”
‘”Ma garan karo sidaan ugu faraxsanahay inaan furto akoonkeyga goolasha xulka, waxaan taas uga mahadcelinayaa hoggaamiyaha xulka qaranka ee Bashiir Hyford kaas oo isiiyay fursadaan, waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka kooxdeyda Mogadishu City Club kuwaasoo i tus indhaha caalamka.” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Si kastaba ha ahaatee, xulka qaranka Soomaaliya ayaa kulanka labaad la dheeli doona xulka South Sudan.